September 5, 2021 - Achawlaymyar
မိနျးကလေးမြား အထူး ဖတျသငျ့တဲ့ သံပုရာသီး အစှမျးအံ့မခနျး
September 5, 2021 by Achawlaymyar
မိနျးကလေးမြား အထူး ဖတျသငျ့တဲ့ သံပုရာသီး အစှမျးအံ့မခနျး *ခံတှငျး ကနျြးမာရေး* သံပုရာသီးဟာ သှားကို ဖွူစပေါတယျ။ သံပုရာသီးအခှံကိုဆား (တကျောစာ)နဲ့ ရောပွီး ပှတျပေးရငျ သှားကို ဖွူစရေုံတငျမကဘူး။ တောကျပစပေါတယျ။ ခံတှငျးအနံ့ မကောငျးတာလညျး ပြောကျစပေါတယျ။ သှားကိုကျနရေငျလညျး သံပုရာရညျနဲ့ ပလုတျကငျြးပေးပါ။ *နှုတျခမျးကှဲခွငျး* မကျြနှာလိမျးခရငျမျတဈဇှနျး (လကျဖကျရညျသောကျဇှနျး) နဲ့ လိမ်မျောရညျ၊ ပြားရညျတို့ကို ရောစပျပွီး လိမျးပေးပါ။ တဈပတျလောကျ လိမျးရုံနဲ့ သိသာ ထငျရှား ပြောကျကငျး သှားပါလိမျ့မယျ။ *ဆံပငျကြှတျခွငျး* အုနျးရညျလေးဇှနျး (စားပှဲတဈဇှနျး)နဲ့ သံပရာရညျတို့ ရောစပျပွီး တဈပတျတဈခါလောကျ လိမျးပေးရငျ ဆံပငျကြှတျတာ ပြောကျကငျး စပေါတယျ။ *ဦးရပွေား ယားယံခွငျးနှငျ့ ဒဏျပြောကျဖို့အတှကျ* ကွကျဥအကာရညျနှငျ့ သံပရာရညျ (သံပုရာသီးတဈလုံးစာ) တို့ရောပွီး ဆံနှယျအမွဈကနေ … Read more
Aသှေး Aသှေးလေးတှအေမြားစုဟာသနားစရာ၊ ခဈြစရာအလှနျကောငျးကွပါတယျ။ သူတို့တှဟောအပွငျပနျးမှာခကျထနျကွမျးတမျးတယျ ထငျရပမေယျ့ အတှငျးစိတျသဘောထားကတော့ အလှနျနူးညံ့ သိမျမှပေ့ါတယျ? သူမြားကိုကူညီလိုကျလို့ကိုယျ့မှာသုညဖွဈသှား ခဲ့ရငျတောငျ ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့သူအဆငျပွနေတေယျဆိုရငျ ကွညျနူး ပီတိဖွဈနတေတျတဲ့သူတှပေါ Aသှေးလေးတှဟော……… စတေနာလညျးအရမျးကောငျးသလိုသံယောဇဉျလညျးအလှနျကွီးကွတဲ့သူတှပေါ။ သူတို့ဟာစိတျဆိုးစိတျကောကျလညျးလှယျပါတယျ။ခဏခဏလညျးစိတျဆိုးစိတျကောကျတတျပါတယျ စိတျကောကျ လညျးခဏပဲ။ ခြော့မယျ့သူရှိရငျတော့ဟနျအမူပိုပွီးဆကျပွီးတော့စိတျကောကျဟနျ…ဆောငျနတေတျပါတယျ။ခြော့မယျ့သူမရှိရငျ တော့သူ့အလိုလိုပြော့သှားရော A သှေးလေးတှဟောခဈြသူအပျေါမှာလညျးကလေးတဈယောကျလိုဆိုးနှဲ့ခငျြကွပါတယျ။ အခဈြလညျးအရမျးကွီးပါ တယျ။ ဒါပမေယျ့အခဈြစိတျကွီးတော့ဘယျလောကျကွီးတဲ့အပွဈဖွဈဖွဈစိတျရှညျသညျးခံပွီးနားလညျခှငျ့လှတျ ပေးနိုငျတဲ့သူ တှပေါ။ ဒါပမေယျ့စိတျထဲမှာတော့မတငျမကနြဲ့အမွဲသံသယဖွဈနတေတျတယျ။ ဖွဈခဲ့သမြှ အတိတျတှကေိုတော့ အမွဲမမေ့ ဖြောကျနိုငျပဲ အမှတျကွီးတဲ့သူတှပေါ A သှေးလေးတှဟောအမြားအားဖွငျ့ကိုယျ့ ဘဝကို စိတျညဈစရာကောငျးတယျလို့ထငျနတေတျပါတယျ။ သူမြားအကွညျ့တှကေိုလညျး သညျးမခံနိုငျသလို သူ့ကိုသူမြားတှကေစိတျထဲမှာ ဘယျလိုထငျနမေလဲဆိုတာကိုအမွဲသိ ခငျြနသေူတှပေါ။ Aသှေးလေးတှဟောကိုယျ့ကိုယျကိုလညျးမခဈြတတျဘူး။ …..သူမြားတကာတှကေိုလညျးတျောရုံတနျရုံအထငျမကွီး တတျဘူ A သှေးလေးတှဟောတဈခါတဈလကေိုယျ့ကိုယျကို…..တောငျo_O ယုံကွညျဖို့ခကျခဲနတေတျတယျ။ သူ့မှာအတှေးအချေါကောငျးတှရှေိနတောတောငျ… သူမြားစကားကိုယုံပွီးလကျခံတတျတဲ့အတှကျ အလုပျတဈခုကိုလုပျ မယျဆိုရငျလညျးစဉျးစားနတောနဲ့ပဲအခနျြိကုနျသှားတတျတယျ။ – လုပျလိုကျတဲ့ကိစ်စတဈခုကို အမြားအားဖွငျ့ပွဿသ၁နာဖွဈမယျ … Read more
မိန်းကလေးတွေအဆုံးသတ်မကောင်းမှာစိုးလို့ သတိစကားလေးပြောလိုက်တဲ့ MRTV-4 မင်းသမီးလေး မေမီကိုကို
မိန်းကလေးတွေအဆုံးသတ်မကောင်းမှာစိုးလို့ သတိစကားလေးပြောလိုက်တဲ့ MRTV-4 မင်းသမီးလေး မေမီကိုကို MRTV-4 မင်းသမီးလေး မေမီကိုကို ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ များစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြု အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိ ထားသူလေးမို့ အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်။ ချစ်စရာကောင်းသလို သရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတာမို့ပရိသတ်တွေအားပေး ချစ်ခင်ကြတဲ့ မေမီလေးကတော့ ချစ်သူေ လးနဲ့ အချစ်ရေးမှာအဆင်ပြေနေလို့ လူတိုင်းကအားကျနေရတဲ့ မင်းသမီးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ ချစ်စရာ အပြုံလေးတွေနဲ့ မြင်သူတိုင်းကိုစွဲဆောင်နိုင်သူလေး ဖြစ်နေတဲ့ မေမီကိုကိုကတော့ အရမ်းကိုအချစ်ခံနေရသူလေး ဖြစ်ပါတယ်နော် သူမကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းနွဲ့ဆိုးဆိုးတတ်သူလေး ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့အင်တာဗျုးမှြာေ ဖပေးပါသေးတယ်နော်.. ခုတစ်လောမှာ MRTV-4 မှာ ပြန်လွှင့်နေတဲ့ ပျားရည်အိုင် ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ မြိုင်ဆိုတဲ့ ဇာ တ်ရုပ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်လွန်းတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက အရမ်းကိုအားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူမ ကတော့ ဒီနေ့လေးမှာ … Read more
လူတိုင်းအတွက် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့သည့် မင်္ဂလာဆောင်အကြိုဓာတ်ပုံကို အများနှင့်မတူအောင် သုဿန်တွင် သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည့် စုံတွဲနှစ်ဦး
ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းအတွက် ဖြစ်မြောက်လာစေရန် အမြဲဆန္ဒရှိနေသော အိမ်မက်လေးမှာ လူအများနှင့်အတူ စည်ကားခမ်းနားသော မင်္ဂလာပွဲလေးကို ကျင်းပနိုင်ရန်သာဖြစ်ပေသည်။ မင်္ဂလာပွဲလေးတွင် ဘဝ၏အမှတ်တရများကို ဖန်တီးရင်း ရိုက်ကူးခဲ့သော မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံများကို နောင်တစ်ချိန်ကျလျှင် ပြန်ကြည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ စုံတွဲနှစ်ဦးတို့ဟာ သူတို့၏ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက်ရှုခင်းနေရာများကို ရွေးချယ်ရာတွင် အများနှင့်မတူစေရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စုံတွဲနှစ်ဦးဟာ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံများကို သုဿန်တွင် သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့၏ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးထားသောနေရာကြောင့် လူအများစုတို့ဟာ သဘောကျနှစ်ခြိုက်မှုတော့ မရှိခဲ့ဘူးဟု သိရပါတယ်။ Shoon (Cele Daily) Unicode လူတိုငျးအတှကျ မနှဈမွို့ဖှယျရာဖွဈစခေဲ့သညျ့ မင်ျဂလာဆောငျအကွိုဓာတျပုံကို အမြားနှငျ့မတူအောငျ သုဿနျတှငျ သှားရောကျရိုကျကူးခဲ့ကွသညျ့ စုံတှဲနှဈဦး ခဈြသူစုံတှဲတိုငျးအတှကျ ဖွဈမွောကျလာစရေနျ အမွဲဆန်ဒရှိနသေော အိမျမကျလေးမှာ လူအမြားနှငျ့အတူ စညျကားခမျးနားသော မင်ျဂလာပှဲလေးကို ကငျြးပနိုငျရနျသာဖွဈပသေညျ။ မင်ျဂလာပှဲလေးတှငျ ဘဝ၏အမှတျတရမြားကို … Read more
တပ်ထောက်ခံသူ မော်ဒယ် ရွှေရူပါဦး မှ (မိဘတွေ က မဆုံးမကြလို့ဒီခေတ်လူငယ်တွေ က ရိုင်းစိုင်း နေကြတာလို့ ပြောလာ)….
Unicode မိဘတှေ က မဆုံးမကွလို့ဒီခတျေလူငယျတှေ က ရိုငျးစိုငျး နကွေတာလို့ ပွောလာတဲ့တပျထောကျခံသူ မျောဒယျ ရှရေူပါဦး စိတျအထှထှေရှေိတဲ့လူအမြိုးမြိုးကိုခှငျ့လှတျနားလညျပေးနိုငျရငျ မိမိစိတျငွိမျးခမျြးမှုအစဈကိုရရှိတာပါပဲ ဘဝမှာဘာခံစားခကျြမှအရေးမပါ/အသုံးမကလြို့ ဘာလာလာသိပျမခံစားတတျသလို ခံစားမှုရှိလာခဲ့လညျးမမွဲဘူးဆိုတာကို သဘောပေါကျလို့ပါပဲ သူကသူ/ကိုယျကကိုယျဖွဈလို့သူမြား အကုသိုလျ/ကုသိုလျဟာကိုယျနဲ့လားလားမှမသကျဆိုငျပါလေ ကိုယျပွုသမြှကံကိုယျသာခံသူပွုသမြှကံ သူသာခံပါပဲ တစ်ဘဝဟာတစ်ခဏတာပါ သံသာရာကွီးသာရှညျလြှားတာပါ သံသရာခရီးကိုအရှညျကွီးသှားမလားတိုအောငျသှားမလား ဒါကိုပဲစဉျးစားတှေးချေါပွီးလုပျသငျ့တာကိုလုပျကွပါ လောကီ/လောကုတျမာနျမတကျကွပါနဲ့တဲ့ အဖွရှောရငျအသုဘပဲရှိပါတယျတဲ့ အကုသိုလျအမှုပွုကွပွီးမိုကျရိုငျးဆဲဆိုနကွေတဲ့သူတှကေို ကွညျ့ပွီး သနားကရုဏာဖွဈမိပွီးမကျြလို့ရညျပါကမြိလို့ဒီစာရေးပါသညျ ယနခေ့တျေကြှနျမတို့အရှယျတူလူငယျတှစေိတျဓာတျတှပေကျြပွား ရိုငျးစိုငျးနကွေတာ ရတနာ၃ပါးအဆုံးအမနဲ့မိဘတှရေဲ့သှနျသငျမှုမရှိကွတာကိုသကျသပွေနပေါတယျ Zawgyi Unicode မိဘတွေ က မဆုံးမကြလို့ဒီခေတ်လူငယ်တွေ က ရိုင်းစိုင်း နေကြတာလို့ ပြောလာတဲ့တပ်ထောက်ခံသူ မော်ဒယ် ရွှေရူပါဦး စိတ်အထွေထွေရှိတဲ့လူအမျိုးမျိုးကိုခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်ရင် မိမိစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်ကိုရရှိတာပါပဲ ဘဝမှာဘာခံစားချက်မှအရေးမပါ/အသုံးမကျလို့ ဘာလာလာသိပ်မခံစားတတ်သလို ခံစားမှုရှိလာခဲ့လည်းမမြဲဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်လို့ပါပဲ သူကသူ/ကိုယ်ကကိုယ်ဖြစ်လို့သူများ အကုသိုလ်/ကုသိုလ်ဟာကိုယ်နဲ့လားလားမှမသက်ဆိုင်ပါလေ ကိုယ်ပြုသမျှကံကိုယ်သာခံသူပြုသမျှကံ သူသာခံပါပဲ တစ္ဘဝဟာတစ္ခဏတာပါ သံသာရာကြီးသာ … Read more
ဒီပို့စ်ကိုမြင်ရင် ကောင်မလေးရဲ့အမျိုးသား အမြန်ဆုံးကျွန်တော်ဆီဆက်သွယ်ပါလို့ ရေးသားလာတဲ့ လူရွှင်တော် မိုးစက်
ဒီပို့စ်ကိုမြင်ရင် ကောင်မလေးရဲ့အမျိုးသား အမြန်ဆုံးကျွန်တော်ဆီဆက်သွယ်ပါလို့ ရေးသားလာတဲ့ လူရွှင်တော် မိုးစက် ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတခါဖော်ပြပေးမဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ နယ်ပြန်သွားပြီး ပြန်မလာသေးတဲ့ခင်ပွန်းကို မျှော်နေရှာတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည် အ မျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ထဲခုန်ချ ဖို့အထိတောင် တွေးထားခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ ဖော်ပြပါ ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီးက ဇာတိခဏ ပြန်ဦးမယ်ဆိုပြီး ပြန်မလာသေးတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို မျှော်နေရှာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုအချိန်မှာ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲလာလို့ လူ ရွှင်တော် မိုးစက်က ကူညီ စောင့်ရှောက် ပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ မိုးစက်က အဆိုပါ အ မျိုးသမီးရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အခုလိုပြန်လည် ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ညီမမျက်နှာပုံကို ဖျက်မတင်ပါနဲ့ ညီမအမျိုးသား တွေ့ရင်သူပြန် လာမယ်ထင်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ အရမ်းများလွန်းလို့ … Read more
ဝိတ်ချနေပေမယ့် ဝိတ်ပြန်တက်လာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း (၇) ချက်
ဝိတ်ချနေပေမယ့် ဝိတ်ပြန်တက်လာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း (၇)ချက် ဝိတ်ချဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ဝိတ်ပိုတက်လာက တကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာပါပဲ။ အစားလျှော့စားတာက ဝိတ်ကျစေပေမယ့် အခြားသော အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ဝိတ်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ၁။ လေ့ကျင့်ခန်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကလည်း ခဏတာ ဝိတ်တက်လာစေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ဝိတ်တက်လာတာက ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ရလာတော့မယ့် လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ ဝိတ်ချနေပေမယ့် ဝိတ်ပြန်တက်လာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း (၇)ချက်(1) လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကြွက်သားတစ်ရှူးတွေကို ဖျက်စီးလိုက်ပြီး ကြွက်သားတွေကို ပိုသန်မာလာအောင်၊ ပိုကြီးထွားလာအောင် ပြုပြင်ပေးလို့ပါ၊ ၂။ Yo-yo dieting အစားကို အလွန်အကျွံလျော့စားတဲ့နည်းဖြစ်တဲ့ Yo-yo dieting ကလည်း ဝိတ်ပြန်တက်စေပါတယ်။ ဝိတ်ချနေပေမယ့် ဝိတ်ပြန်တက်လာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း (၇)ချက်(2) ဒီနည်းက ၅ နှစ်အတွင်း ဝိတ်ပြန်တက်လာစေပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားချင်ရင်တော့ Yo-yo dieting … Read more
လိုင်းပေါ်ကနေ ၅ လ လောက်ပျောက်သွားပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ မပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အကယ်ဒမီ မင်းသမီးကြီး ထက်ထက်မိုးဦး
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး ကတော့ အနုပညာလောကမှာ တစ်ခေတ်ပြ န်ပေါ်လာခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါပဲနော်။ ရောင်းသမျှ ရတနာ ပစ္စည်းတိုင်းကိုလည်း ဝက်ဝက်ကွဲ ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ အထိကို အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့သူပါ ပဲနော်။ စစ်ကောင်စီ အာဏာသိမ်းတဲ့ အချိန်မှာတော့ အားလုံးရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားခဲ့ရ ပါတယ်နော်။ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ ဆန္ဒပြပွဲ တွေမှာလည်း မပါဝင်ခဲ့ကြပဲ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ မှန်သမျှ လုံးဝမတင်ဘဲ ငြိမ်သက်စွာ နေခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိသတ်တွေရဲ့Social punishment လုပ်တာကို အကြီးအကျယ်ခံ ခဲ့ရပါတယ်နော်။ အခုတော့ (၅) လလောက် လိုင်းပေါ်ကနေ ပျောက်သွားတဲ့ အကြောင်းကို ဝန်ခံလာခဲ့ ပါပြီနော်။ ထက်ထက်မိုးဦးဟာ ခါးကျီးပေါင်း ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရတာ အချိန်အတော်ကြာ ပြီဖြစ်ပြီး … Read more
Zawgyi ယခုခေတ်နောက်ပိုင်း လူသားများသည် နားမလည်အောင်ပဲ မိန်းကလေးများကယောက်ကျားစိတ်ပေါက်ပြီး ယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်လို ပြုမူနေထိုင်တတ်ကြတယ်။ ယောက်ကျားလေးတွေကလည်း မိန်းကလေးစိတ်ပေါက်ပြီး မိန်းမမယူကြတော့ပဲ ယောက်ကျားချင်းချင်းယူတတ်ကြပါတယ်။ ခေတ်တွေကပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်ပြီး နားလည်ရခက်လာပါပြီ။ ယခုတွင်လည်းထိုင်နိုင်ငံကစုံတွဲတစ်တွဲသည် နှစ်ဖက်မိဘများကသဘောတူ ပေးစားကြပြီး လက်ထပ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာလက်ထပ်ပြီး ၅ လအကြာမှာ မထင်မှတ်ပဲပြဿနာဖြစ်ပြီးလင်မယားကွဲသည့်အထိတောင်ပြဿာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ခင်ပွန်းဟာ အခြော်က်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး တိတ်တခိုးလင်ယောက်ျားရှိနေတဲ့အကြောင်းကို ဇနီးဖြစ်သူကရိပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူက ခင်ပွန်းရဲ့ဖုန်းကို ခဏငှားယူဆက်ရန် ဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာမှ သူမ​၏ခင်ပွန်နဲ့သူရဲ့လင်တွေ စကားပြောထားတဲ့ဟာတွေ ဓာတ်ပုံများကိုတွေ့ရှိပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူက နှစ်ဖက်ချွန်ဖြစ်မှန်းသိခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ ထိုအမျိုးသမီးသည် သူမ​၏ခင်ပွန်းဟာဘယ်လိုလူလည်းဆိုတာသိခဲ့ပြီးနောက် အလွန်အရှက်ရပြီး ရင်နာလို့မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ BB-(Entzonemm) Unicode ယခုခတျေနောကျပိုငျး လူသားမြားသညျ နားမလညျအောငျပဲ မိနျးကလေးမြားကယောကျကြားစိတျပေါကျပွီး ယောကျကြားလေးတဈယောကျလို ပွုမူနထေိုငျတတျကွတယျ။ ယောကျကြားလေးတှကေလညျး မိနျးကလေးစိတျပေါကျပွီး မိနျးမမယူကွတော့ပဲ ယောကျကြားခငျြးခငျြးယူတတျကွပါတယျ။ ခတျေတှကေပွောငျးပွနျဖွဈကုနျပွီး နားလညျရခကျလာပါပွီ။ ယခုတှငျလညျးထိုငျနိုငျငံကစုံတှဲတဈတှဲသညျ နှဈဖကျမိဘမြားကသဘောတူ … Read more
ကိုယ်မှကိုယ်ဖြစ်နေသော ညီအစ်ကို ၅ယောက်လုံးကို အားနာတာကြောင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လက်ထပ်ခဲ့သည့် မိန်းကလေး
ကိုယျမှကိုယျဖွဈနသေော ညီအဈကို ၅ယောကျလုံးကို အားနာတာကွောငျ့ တဈပွိုငျနကျတညျး လကျထပျခဲ့သညျ့ မိနျးကလေး အိမျထောငျရေး ဖူးစာဟာ အလှနျအံ့အားသငျ့ဖှယျကောငျးလှပွီး အခြို့သောသူမြားမှာ တဈအိုးတဈအိမျထောငျမဟုတျပဲ လေးငါးယောကျလုံးနှငျ့ အိမျထောငျကတြတျကွသညျ။ ယခုအခါတှငျလညျး အိန်ဒိယနိုငျငံ Uttarrakhanပွညျနယျ Dehraunမွို့ရှိ ရှာလေးတဈရှာတှငျ နထေိုငျသော Rajo Vermaအမညျရှိ အသကျ ၂၁နှဈအရှယျ မိနျးကလေးသညျ အခဈြရေးကံကောငျးလှနျပွီး ညီအဈကို၅ယောကျလုံး၏ အသညျးအသနျ ခဈြမွတျနိုးမှုကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ မိနျးကလေးဟာ ညီအဈကို၅ယောကျအနကျ အကွီးဆုံးမှာ အသကျ ၃၂နှဈအရှယျဖွဈပွီး အငယျဆုံးက အသကျ ၁၈နှဈသာ ရှိသေးပွီး သူမအား ၅ယောကျလုံးက သဲသဲလှုပျခဈြကွသညျ့အတှကျ တဈယောကျကိုရှေးလိုကျသျောလညျး ကနျြသညျ့သူမြားကို ခံစားရမညျကို မကွညျ့ရကျ၍ သဘောတူညီမှုဖွငျ့ အကုနျလုံးနှငျ့ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ မိနျးကလေး၏ အခဈြရေးကံကောငျးမှုကွောငျ့ အခြို့မှာ အားကမြနာလိုခွငျးတှေ ဖွဈရပွီး သူတို့အားလုံးမှာ … Read more